Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Oceania Tim Cahill Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a football footballius kasị mara aha na aha njirimara; 'Timmy'. Anyị Tim Cahil Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Australian na Everton FC Soccer Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch obere ihe ọmụma banyere ya.
Obi abụọ adịghị ya, a na-ahụ Tim Cahill dịka otu n'ime ndị egwuregwu Australia na-eme nke ọma. Ugbu a, ka anyị banye n'ime mmadụ ya.
Tim Cahill Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Cahill na 6 Disemba 1979 na Sydney na nna nna Bekee nke agbụrụ Irish (Tim Cahill Snr) na nne Samoan (Sisifo Cahill).
A gbara ya ume ịgba bọlbụ dịka nwatakịrị, ọ bụ ezie na o tolitere na nnukwu ịgba egwuregwu ịgba egwu egwuregwu. N'agbanyeghị nke ahụ, Tim nwere mmasị na ya Football.
Otu n'ime ihe omume ntụrụndụ kachasị amasị ya bụ ile Barclays Premier League. O doro anya, ọ nwere ike ime ihe ọtụtụ ndị Australia na-esiri ike ime.
Nke ahụ na-amụ anya n'oge ụra n'abalị (12: 00 n'etiti abalị - 4: 00am) iji lelee ihe ọ bụla na-eme n'egwuregwu Bekee.
Banyere bọọlụ, ọdịiche dị egwu nke Australia na Britain egbochila ọtụtụ mmadụ ile egwuregwu ahụ.
Dị ka obere 5 afọ, ọ tolitere na-akwado Everton football club. Klọb ahụ dị n'etiti 80 si na-achịkwa bọọlụ Bekee.
Ha meriri egwuregwu nke Premiya n'oge oge 1985/1986 na 1986/1987. Tim tolitere na-ekiri ma na-amụta ihe site na Everton onye ọ hụrụ n'anya, Gary Lineker.
Dị ka nwatakịrị, ọ dịghị anabata ya ịmụrụ anya n'abalị. Tim Cahil ga-achọ ikike pụrụ iche iji bilie n'etiti abalị site n'aka nna nna ya nke Britain bụ onye bụkwa onye na-akwado egwuregwu bọọlụ Bekee.
Ha abụọ lekọtara ọnụ. Dị ka Tim si kwuo;
Anaghị m ele ihe nkiri. M ga-egwu ma ọ bụ lee Barclays Premier League Football. Ọ na-atọ m ụtọ ile egwuregwu na Premier League dị ka nwatakịrị. Nke ahụ bụ otú m si atụrụ ndụ.
Enwere m ike ịhụ mgbe ọ bụla na-enwu gbaa na paseeji… nke Premier League football ọbụna iko ụwa na ihe ndị dị otú ahụ. M na-atụ egwu ndị ọrụ egwuregwu n'oge ahụ. Enwere m ekele maka nkà ha, ” o kwuru.
"N'oge ahụ dị ka onye na-agba ọsọ na-agba ọsọ, echere m banyere otu o siri sie ike ịbanye na ọkwa ahụ, na mgbe m nọ ebe ahụ, m na-elegharị anya wee hụ onwe m ka m na-agbakọ na ọwara ma m guzo n'akụkụ Ruud van Nistelrooy, I ' m guzo n'akụkụ Thierry Henry, Robby na Roy Keane, Owen, na Robert Pires.
Ọ bụ n'oge ahụ ka m na-agwa onwe m, na "Chaị, emesịrị m mee ya na ndụ". Mgbe ahụ, m na-agwa onwe m ọzọ, “tnke a enweghị ụzọ m ga-esi si na olulu a na-enweghị otu uwe mwụda ha. ”
Okwesiri ikwuputa na nne na nna Tim Cahill mere otu n’ime ihe kachasi nnukwu àjà iji nweta ya n’elu. A ga-akọwa nke a n'ogologo ogologo a. Ndị mụrụ ya hụrụ ọgụgụ isi ya n'anya.
O nwere ike ile ihe anya n'abalị niile, ma ọ dịghị mgbe ọ bụla ọ na-egosi ihe ụra nke ehihie. Ọ bụ ọbụna ndị kasị mma na klas ya kpọrọ ndị mụrụ ya.
Tim Cahill Biography Eziokwu - Site na Rugby ruo Football:
Tim Cahill tolitere na gburugburu ya na-agba egwu Rugby na-egwu ụmụ nwanne nna nke mere ka o kwenye ichefu football ma bido na egwuregwu ha.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ na-esoro ha mgbe ụfọdụ na-egwu Rugby. O mere ọ bụghị n'ihi na ọ hụrụ egwuregwu ahụ n'anya, kama ọ bụ n'ihi ịhụnanya maka ụmụ nwanne nne ya.
Gị nna ya (Tim Cahill Snr) chọrọ ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ọ chọrọ ịghọ. Ọ bụ nne ya (Susifo) jụrụ n'ike nwa ya nwoke na-egwu Rugby.
Ọ tụrụ egwu na egwuregwu ahụ dị ize ndụ karị na nwa ya nwoke nwere ike merụọ ya ahụ nke ukwuu.
Ma, mgbe ọ na-echegbu onwe ya banyere nchegbu ọ na-enwe banyere ndị na-eme egwuregwu na-emerụ nwa ya ahụ, ọ na-amanye di ya iji zipu ya gaa n'ihe ọ kpọrọ dịka “Egwuregwu dị nchebe” nke bọl.
N'oge na-adịghị anya, nwanne nwoke nwoke nke tọrọ nwanne Tim nke nwoke bụ Sean sooro otu bọọlụ ahụ.
Tim Cahill Biography Eziokwu - Otu esi aga England:
Ndi nne na nna (Tim Cahill Snr na Sisifo) kpochapuru $ 10,000 iji nweta otu nwa ha nwoke na England. Ha kpebiri na ọ ga - abụ Tim n'ihi oke ịhụnanya ya ogologo oge maka bọọlụ bekee.
Ezinụlọ ahụ kpebiri na ọ ga-abụ ohere ya naanị iji gosipụta talent Australia ya. Ha mere ka ndị na-egwu egwu na nwa ha nwoke, Tim gara London iji soro Millwall FC nwee ule na 1998.
Ezinụlọ ya mebiri mgbe Tim gara njem. Nwanne ya nwoke nke nwanne ya nwoke aghapuru ulo akwukwo iji nweta oru. O mere nke a iji nyere aka kwado ego n'ụlọ.
Dị ka Tim si kwuo, “N’oge ahụ, ọ dịbeghị ụbọchị m na-echeghị banyere ya. M na-akpọ ya ọmarịcha ọnya, ” o kwuru.
Ezinụlọ ya gbalịsiri ike iji ego ha nyere ha aka mgbe ha hapụrụ. Ha na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ awa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma nwee ọganihu dị ala ruo mgbe nwa ha nwoke mere ya.
Dị ka mama ya si kwuo, Anyị enweghị ego anyị ga-ahọrọ. Anyị enweghị ike ị nweta ego iji hụ ya site na nrọ ya. Ya mere, anyị ga-agbaziri ego. Anyị ghọrọ ndị ji ụgwọ ọtụtụ afọ. Obi dị anyị ụtọ na a kwụrụ ụgwọ àjà anyị.
Ihe niile anyi choro bu ka o nwee ihe ịga nke oma dika ndi n’abia bọọlụ n’egwuregwu Premier League. Obi dị m ụtọ na ọ mechara gafee ”
Mgbe Cahill rutere England, ọ gbazitere ụlọ nke otu ọnụ ụlọ. Ọ gbasiri mgba ike ka ọ nwee ihe ịga nke ọma na ọnwụnwa ya.
N'ụzọ dị mma, mgbalị ya akwụ ụgwọ. Ọ bụ Millwall bịanyere aka na ya n'afọ 1998. N'akwụkwọ ya 'Tim Cahill Hapụrụ', o dere na o zitere 5,000 pound na-akwụ ụgwọ n'ụlọ dị ka akụkụ nke ịkwụ ụgwọ maka mbinye ego.
Ị na-akwụ ụgwọ ọrụ football gị. Ọ ka na-echekwa iji jee ozi mbinye ego na ọbụna zitere 5,000 pound n'ụlọ. Ndị ezinụlọ ahụ na-etinye ego na mbụ na ụlọ nke nwere ego.
Tim Cahill Bio - Njikọ Ezinụlọ Rugby:
Tim Cahil bụ nwanne nwanne Samoan na onye bụbu onye isi Samoa, Chris Cahill. Ọtụtụ n'ime ndị ikwu ya na-etinye aka na ịgba egwuregwu rugby.
N'ezie, ụmụ nwanne nne atọ etinyela aka n'ịgba rugby ọkachamara. Ha gụnyere Ben Roberts (New Zealand Rugby League) na Jeremy Stanley (New Zealand Rugby Union).
Ọzọkwa, ụmụ nwanne ya nwoke abụọ bụ ndị egwuregwu rugby ọkachamara, Chase Stanley na Kyle Stanley metụtara ndị ọkachamara Rugby Union Sam Stanley (Saracens & England U20), Mike Stanley (Samoa), Benson Stanley, na Winston Stanley.
Ọnye na-bụ Rebekah Greenhill? Nwunye Tim Cahill:
Tim Cahill lụrụ obi nwata, Rebekah Greenhill na Mee 2010. N'oge na-adịghị anya di na nwunye ahụ nwere ụmụ anọ.
Ọ bụghị ụdị agbamakwụkwọ Las Vegas kama a kwadoro ya na Bellagio Hotel a ma ama na ụwa na ndị 50 na-akwado ndị enyi na-ekiri.
N'ụbọchị agbamakwụkwọ ya, Tim Cahill gwara nwunye ya; “Is bụ ezigbo di ma ọ bụ nwunye m, ihe m niile.”
Tim Cahill kwuru na ya na nwunye Ribeka achọtabeghị ọnọdụ di na nwunye na-adọrọ adọrọ na ụdị ndụ nke ndị ọzọ na-agba ọsọ na ndị nwunye ha na-amasị, gụnyere David na Victoria Beckham.
Ihe a na-elekwasị anya bụ ibi ndụ dị mfe, soro ndị nwunye na ụmụaka nọrọ naanị oge. Ọ dị mkpa iburu n'uche na Tim hụrụ n'anya na ya na ụmụ ya. Nye ya, “Ụmụaka bụ ihe niile”
Tim nwere ụmụaka anọ bụ ndị hụrụ egwuregwu n'anya n'ezie. Sonsmụ nwoke atọ (3) aha ya bụ Kyah, Shae na ọdụdụ enweghị aha na nwa nwanyị Sienna. Ha niile si na nwunye ya Rebekah Cahill.
N'ịbụ ndị gbara ụmụaka mara mma gbara gburugburu mgbe ha na-enwe aṅụrị n'ikpeazụ, ihe mere Tim Cahill jupụtazuru na obi ụtọ. Nwoke zuru oke nke nwoke kwuru otu oge 'Ezinụlọ ga-ebute ụzọ tupu football'
Inweta obi ụtọ na ezinụlọ m bụ otu ihe na enwere m ndụ m niile. Ihe ọ bụla ọzọ na - eso ya ọbụlagodi [football] bụ adịgboroja.
Ọzọkwa, ego, nkwekọrịta na akwụkwọ akụkọ. Dị ka ndị ezinụlọ, ị nwere ike iwepụ m ihe niile echi, m ka ga-enwe obi ụtọ. Ọ bụrụhaala na ezinụlọ m bikọtara ọnụ, ọ bụ naanị ya bụ ihe dị m mkpa ”.
Tim Cahill anaghị ahụ ọnọdụ ya dị ka ihe pụrụ iche, kama ịhọrọ ilekwasị anya n'ihe ọ maara.
Ọ na-akwụ ndị mụrụ ya ụgwọ maka itinye ya n'ọnọdụ ebe ndị nkuzi nwere ike iduzi ya ma nwee ohere igwu egwu na ọkwa dị iche iche - n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị gwara ya na ọ pere mpe ka ọ bụrụ onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara n'otu oge. .
Eziokwu nke Tim Cahill - Ọkara Britain, Ọkara Somoan:
Ọ bụ ezie na ebe a mụrụ Cahill bụ Sydney, Australia, nna ya bụ onye agbụrụ Irish, mana o biri na England n'oge ndụ ya. Cahill na-enweta ọchịchịrị gbara ọchịchịrị site na nne ya bụ nwa amaala Samoa.
Echere na Cahill nwere nhọrọ nke ịnọchite anya Ireland n'ihi nna ya, mana ọ nọchitere anya Samoa na Australia na ọrụ mba ya.
Tim Cahill Biography Eziokwu - Nchịkọta Ọrụ:
Mgbe ọ bụ nwata, Cahill na-egwu bọl maka ndị uwe ojii Bollywood Club, Marrickville Football Club, na Plumpton / Oakhurst Soccer Club.
Ọ dịrị ndụ ma gbaa bọọlụ na Samoa obere oge dị ka nwata. Ọ nọchitere anya otu ndị otu bọọlụ mba Samoa mgbe ọ dị afọ 14. A kwagara England na 1998 iji gbaa bọọlụ maka Millwall FC.
Ka oge na-aga, ọ ghọrọ akụkụ dị mkpa nke aghụghọ nke Millwall. Ihe Cahill na-ewu ewu na-ewepụ na oge 2003-2004 mgbe ọ nyeere Millwall aka iru egwuregwu FA Cup, mana Manchester United meriri 3-0.
Nke a kpaliri mmasị na Everton. Tim Cahill hụrụ ndị Everton anya ma n'oge ọkọchị nke 2004 ọ kwagara Goodison Park.
Ọ dabara na ngwa ngwa wee gwụchaa oge ahụ dị ka onye goolu bọọlụ Everton kacha elu ma họpụta ya dịka ndị egwuregwu bọọlụ Everton n'afọ. N'otu afọ ahụ, Ọ sonyeere Socceroos, ndị otu egwuregwu nke Australia, na 2004.
Mgbe ya na Everton gụsịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri na Premier League nke England, ọ kwagara US na 2012 iji sonyere New York Red Bulls.
N'ebe ahụ, e nyere ya Gold Boot na MVP na 2013. Ebe ikpeazụ ọ gara bụ Shanghai Shenhua FC na Njikọ ndị China. Mgbe o kochara akpụkpọ ụkwụ ya, a họpụtara ya ka ọ bụrụ onye nnọchi anya UNICEF.
Eziokwu Tim Cahill - Nwoke nabatara ọdịbendị:
Tim Cahill abịawo ogologo oge na ndụ. "Site na Australia, bi na London, Manchester, Liverpool, Sydney, New York na Shanghai, ewerewo m ya dị ka njem," ọ na-akọwa.
Anabatala m ọdịbendị nile, nri nile, ndị mmadụ, ibi ndụ ha. ”
Ma na njem ahụ nile, Cahill na-ama mgbe nile banyere àjà ndị ezinụlọ ya mere ka ọ soro nrọ ya.
Na-agba ọsọ 2 Football Academies:
Ihe ọzọ dị jụụ banyere ya bụ na, ọ na-agba ọsọ n'ụlọ akwụkwọ football abụọ. Otu n'ime Wollongong Australia na mmekorita nke ndị uweojii na Wollongong na Obodo Ndị Ntorobịa Obodo, nke ọzọ nọ na Dubai nke ọ na-agba ọsọ na ya na Elite Sporting Academy. Ha abụọ bu oru na 2009.
Tim Cahill Nwanna - A tụrụ ya mkpọrọ afọ isii (6):
Na 2008, a tụrụ Sean Cahill mkpọrọ ruo afọ isii maka mwakpo na Britain nke hapụrụ onye ahụ kpuchiri ìsì.
ya 'obi ọjọọ na egwu' osobo onye agha ya kpọrọ ya nwoke dị ize ndụ na Britain.
Ebu ụzọ mara ya na ọ ga-emerụ ya ahụ na kpụ ọkụ n'ọnụ na Croydon Crown Court maka ịwakpo Chris Stapely, si Orpington, na July 11, 2004.
Nnyocha e mere ka ọ pụta ìhè na ọ gbara ya ụkwụ ugboro ugboro Mr Stapely n'isi n'akụkụ ụlọ ọrụ tagzi na East Street na-ahapụ ya ka ọ mara ihe na ezé gbajiri agbaji na retina na anya aka nri ya.
Mazị Stapely, onye ahụ e merụrụ ahụ chere ihu ndụ na-adịghị mma nke na ọ gaghị enwe ike ịrụ ọrụ ya dị ka onye nyocha ọtụtụ.
Kaji Cahill gwakwara ya ugboro ugboro na-awakpo Mr Stapely na ọbụna daba n'ala ya Australia tupu e jidere ya ọzọ na Sydney, Australia.
Onye Ọchịchị Na-ahụ Maka Anya Ga-enwe Olileanya n'aka ndị uweojii Bromley kwuru, sị: “Maazị Stapely echerela afọ atọ na ọkara ka ọ hụ ikpe ziri ezi maka mbibi obi ọjọọ na ụjọ.
Sean Cahill gọnahụrụ itinye aka ya, ọbụnadị na-enweghị ihe akaebe ọhụụ. A mara ya ikpe ịga mkpọrọ afọ isii mgbe a kpọpụtasịrị ya na Australia.
Ikpe a mara ya bụ nnwapụta nke mbọ niile emere iji kpọga ya ụlọ ikpe ka ikpe ya ikpe.
Tim Cahill Nwanna Akụkọ - Na-emeghachi omume na njide na njide nwanne ya nwoke:
Onye ọkpọ egwuregwu nke Australia gbara otu oge ma mee emume site na ịgafe nkwojiaka ya dịka a tụrụ ya aka ma mesịa kpughee na ọ na-arara ihe mgbaru ọsọ ahụ.
O kpughere na ọ bụ maka nwanne ya nwoke Sean, onye a tụrụ mkpọrọ afọ isii maka ime ka mmadụ kpuo ìsì. Ọ bụ oge mbụ Cahill kwetara na ikpe a mara ya.
Cahill kwuru, sị: “N’ezie, ọ bụ maka nwanne m nwoke. Onye ọ bụla maara ọnọdụ m na m dị mpako na ọ na-enwe obi ụtọ na enwere m obi ụtọ na m na-eche banyere ya mgbe niile.
Ezinụlọ m pụtara m ọtụtụ ihe na otu egwuregwu bọọlụ a. O nweela mmetụta mmụọ mana ọ dị mma. ”
Otu onye na-ekwuchitere Everton kwadoro Cahill site n'ịkatọ na enwere ike ịhụ ememe ahụ dị ka ihe na-ekwesịghị ekwesị.
N'ikwu na ọ maara na ụfọdụ agaghị akwado maka ememe ahụ, ọnụ na-ekwuru kwuru, sị:
"Ememe ebumnuche bụ okwu onwe onye ma onye ọkpụkpọ ahụ ga-ekpebi, ọ dịghị onye na-ekwupụta ihe onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ime ma ọ bụrụhaala na ọ nọ n'ime iwu egwuregwu ahụ, ọ bụrụhaala na ọ kpacharaghị anya."
Tim Cahill Bio - Onye Kasị Mma Ihe Mgbaru Ọsọ nke Australia:
Tim Cahill nwere ihe mgbaru ọsọ na-emetụta oke egwu amaghị. Ọ bụ onye ọkpụkpọ egwuregwu mbụ n’akụkọ ihe mere eme akara na iko mba ụwa atọ na iko Asia atọ.
Naanị ndị egwu asatọ n’akụkọ ihe mere eme agbaala iko atọ n’ụwa: Cahill, van Persie, Arjen Robben, Roberto Baggio, Jurgen Klinsmann na Lothar Matthaus. Pele na Uwe Seeler meriri na iko mba ụwa anọ dị iche iche.
Na mkpokọta, o merie goolu ise na iko mba ụwa. N’ihe dị ka egwuregwu mba iri atọ nke o jiri gbaa otu goolu, Ọstrelia emeriela mmadụ iri na itoolu, tufuo ise ma baa mba isii.
Ihe mgbaru ọsọ ya-kwa-egwuregwu nke 0.4875 tinyere ya 44th na ndepụta oge niile n'etiti ndị egwuregwu ụwa nwere opekata mpe 20.
Cadị ihe mgbaru ọsọ akara aka nke Tim Cahill abụghị ozi ọma nye ndị egwuregwu bọọlụ. O nwebeghị onye Ọstrelịa nwetarala Ebumnuche Dị Ka Ya Maka Otu Mba.
Tim Cahill bụ onye chụrụ wee bie nrọ ya na Everton FC. Ọ bụ mgbe ọ bụ nwata ka ọ na-egwu egwu maka Toffees.
Akara Ememme Mgbalị Mgbaru Ọsọ Na-ezighị Ezi:
Nwa nwoke bọọlụ nwa na-asọ oyi zoro ụkwụ emume ncheta ụgha nke Tim Cahill. gaa-ime ememe: gbaga na ọkọlọtọ akuku ma bido ịkụ ọkpọ.
Nwa nwa nwoke ahụ na-eto eto kpebiri imebi ihe omume Australian nke a na-ahụkarị n'oge nsogbu nke Melbourne City na Central Coast Mariners.
Cahill jegharịrị n'ụzọ na-atụghị anya na ọkọlọtọ nkuku mgbe ọ gbasịrị ma chọpụta na nwatakịrị ahụ na-agba ara kwụsịrị na turf ma jee ije azụ na-egbochi mbọ nnabata ya. Tim mgbe ọ hụrụ na nke a nwere ọkpọ ikuku dị.
Ajụjụ ọnụ Tim Cahill:
Kedu ụzọ ị kachasị amasị gị ịrụ ọrụ?
Tim Cahill - “Abụghị m onye ọkpụkpọ egwu nke nwere ike ịgbapụ n'ọhịa niile maka nkeji iri itoolu. Maka m ọ bụ ihe mgbawa ka ọ bụrụ na mgbe ohere ahụ bịara, enwere m ike ịzaghachi ngwa ngwa, wụ elu karịa onye na-agbachitere ma ọ bụ mee ka mita ise ahụ gbasaa iji buru ụzọ gbaa bọl ahụ. M na-agbalị na emepụtaghachi na m mgbatị ọrụ nke mere na ọtụtụ n'ime ihe m na-elekwasị anya bụ ihe mgbawa mmegharị na ìhè igwe ”
Kedu nọmba gị otu na-aga nri dị mma?
Maka m n'abalị ahụ tupu egwuregwu m na-ahụ na m ga-enweta carbs na protein m maka pasta na ọkụkọ bụ ụzọ dị mma iji jide n'aka na ahụ m nwere ike niile ọ chọrọ maka egwuregwu.
Kedu ihe kachasị mma ị ga - ahọrọ bụ onye na - eme egwuregwu?
Maka m, ọ bụ ihe niile gbasara ịmara na ijikwa ahụ gị. Ọ bụ ya mere m ka ji nwee ike igwu egwu na 35. Nke ahụ na ọzụzụ a kapịrị ọnụ maka po gịsition / ọrụ.
Kedu ihe bụ isi nke ọrụ gị?
Ọ na-esiri m ike ịhọrọ n'etiti mmeri mbụ anyị na World Cup megide Japan na mmeri Asia Cup izu ole na ole gara aga. Iji nweta ihe dị mkpa nke ọlaọcha dị na ala ụlọ bụ ihe m ga-atụle mgbe ọ bụla n'ime oge m dị mpako.
Ihe mgbaru ọsọ ị nyere megide Netherlands na World Cup bụ ezigbo ịtụnanya! Maka gị, kedụ ihe ncheta kachasị echezọ ị metụrụla rue taa?
Dị ka ịtụnanya dị ka ọ bụ akara megide Netherlands, m ka na-atụle ihe mgbaru ọsọ m megide Japan na Germany 2006 dị ka nke kachasị mma nke ọrụ m, kachasị maka mkpa ha maka mmeri anyị.
Kedu ihe fọdụrụ ka ị nweta ka onye egwuregwu?
Ana m atụ anya ịga China ugbu a na Shanghai Shenhua ma nwee ike ịnwe ahụmịhe dị iche na nke ọ bụla m nwere na ọrụ m ruo ugbu a. Ana m achọ inwe mmetụta dị mma na ogige ahụ!
Ọ bụrụ n'ịchụso ọrụ bọọlụ, gịnị ka ị ga-eme kama?
O siri ike ikwu. Ebe ọ bụ na m dị obere, m na-achọ ịbụ ndị nrịba ama. Echere m na ọ ga-abụrịrị na m gaara enweta ụdị ahịa ụfọdụ.
Kedu ihe ị na-eme mgbe ị gụsịrị egwuregwu?
Enwere m ụfọdụ ọrụ na-atọ ụtọ nke na-abụghị egwuregwu bọọlụ nke m ga-ele anya na m ga-etinyekwu aka na ya mgbe m mechara. Echeghị m na agaghị m etinye aka na egwuregwu ahụ.
Kedu ihe bụ nkà ihe ọmụma gị ma a bịa n'ihe gbasara ahụike na ahụike?
Maka m, ọ bụ ihe gbasara itule. Ee, m na-azụ ike, mana ana m agba mbọ na m ga-edozi nke a site na igwu FIFA na ụmụ m. Ọ bụrụ na ihe m mere bụ ọzụzụ ụbọchị niile, agarala m agbapụ ugbu a.
Ị chere na ụmụaka gị ga-agbaso nzọụkwụ gị?
Nwa m nwoke nke abụọ, Shae dị ezigbo mma. Achọrọ m ijide n'aka na m nyere ya ohere ka ọ mee ụzọ nke aka ya n'agbanyeghị na etinyeghị ya nnukwu nrụgide. Na nwa 3 afọ m Cruz na-ekerịta enweghị nchekwa onwe m!
Kedu otu ihe ọtụtụ mmadụ na-amaghị banyere gị?
Singingbụ abụ na egwu na-atọ m ụtọ. Nwa m nwoke nke okenye, Kyah nwere olu dị ịtụnanya na ụmụnne m na ọtụtụ ndị ezinụlọ m nwekwara ikike dị egwu.
Tim Cahill Car Eziokwu - The Bugatti:
O nwere Bugatti Veyron 16.4, ụgbọ ala kacha ike, dị oke ọnụ ma dịkwa ọsọ ọsọ na ụwa.
Bọchị agbanwee: February 3, 2021